Daaraysaa Electric skeidgareeyo The On dhulka - Jomo Technology Co., Ltd
Waxaan sidoo kale u maleeyeen-saabsan mid ka mid ah hababka ugu fiican ee in ay sii xiisad ay khuseyso in drive silsiladda. Ma aha oo dhan hoverboard laakiin keliya, kuwaas oo hoverboards Electric haysta shahaadada ku habboon tahay ammaan in la isticmaalo - waxaa ka mid ah oo dhan ugu sareeya 10 hoverboards fiican hoos ku qoran. Waxay waxaa si kastaba ha ahaatee in la horumariyo. Haddii aad ku lug ku saabsan taam aad baydalka laga yaabaa in baaskiilka iyo u isticmaali hab kaalmo yar yahay. Waxaa jira Harleys mini, mootooyinka bilayska, iyo Cruiser. Waxaan halkaas dareemay lahaa in ay si ka fiican in lagu qabto, kuwaas oo safar gaaban. Ka dibna, waxaa laga yaabaa in, aad si fiican u bartaan oo ku saabsan waxa run ahaantii muhiim. Haddii aad si fudud u safarka badda ee imtixaanka isticmaalo a, madaxa ka soo baxday inay wasakh off-road, ama sii on kula culeys lagu tumo Attam xawaare agagaarka xaafada, waxaa jira a Koowheel Electric skeidgareeyo gabi ahaanba isku aadiyo aad si, iyo qaabka aad. fikradaha badan oo higayaa muuqan aad Fogtahay in ay macquul ah, laakiin tani skeidgareeyo koronto run ahaantii ka shaqeeya oo soo baxday in labada xiiso leh iyo faa'iido leh.
Waxaa aad u qabow, ku ool ah loo dhisay oo farxad leh in ay la kulmaan aad u qabow, si fiican u-dhisay oo xiiso leh in ay la kulmaan! Waxaad u raaci karaan in geeska kasta magaalada aad. Waxaad suurto gal fakadaan karaa iyadoo qofka la geesood la ad istareexsan aad laga yaabaa in kaliya looga baahan yahay in uu horay ama dib ugu Lulaa si aad u sii wado ama beddeli karaan. Waxaa jira muuqaalada dhowr ah sida hoos ku:
1. qalab kaamil ah safar gaaban la playability sare.
2. khafiif, is haysta, la qaadi karo, fudud.
3. Cheap weli raagaya.
The Powerboard Self Dheelitirka mooto waxaa loogu talagalay qof walba. Waa dhab ahaantii qayb ilaa xad ah gebi ahaanba kala duwan si caadiga ah 'hoverboard' mootooyinka is miisaamid waxaana loo isticmaalaa in lagu! Daawashada professionalrider ah sigaar banjarin gadaal, waxaa caadi ah in la qiyaaso waxa uu watay mooto.
Waxa muhiim ah in la qaato dhawraan oo ay xawaare ugu badnaan, nolosha batteriga, qabashada, biriiga, peak, iyo baahi kaydinta, iyo fasaxyada. No joogsato lama filaan ah oo laga yaabo in aad ICOA khatar ah ka hor. Marka aad fiiriso mooto korontada, rullebrett u badan tahay aan kolkii hore diiwaanka. Tani waa mid kale oo laba wheel is korontada mooto dheeli tiran .Waxaad xitaa weli istaagi kara waxa ku saabsan, iyo xitaa ku dhajisan 360 degree in boos. Laba giraangiraha iyo laba matoorada waa faa'iido u xawaare iyo xasiloonida. Tani waa tixgelin muhiim ah in la sameeyo, haddii aad tahay qof cayilan ama buuran gaar ah.
waqti Post: Jan-25-2018